Warehouse Assistant | K.T.Z Company ﻿
18.8.2019, Full time , Accounting/Audit/Tax Services
၁။ ကန်ွပျုတာအသုံးပြုနိုင်သူအား ဦးစားပေး ခန့်အပ်မည်။
၃။ တောင်ဒဂုံ မြို့နယ်၏ အနီးတဝိုက်နေထိုင်သူများအား ဦးစားပေးမည်။
၁။ တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ အား ဦးစားပေးမည်။ ဆယ်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူများလည်း လျှောက်ထားနိုင်သည်။
၂။ အသက် (၃၀)နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။
၃။ Warehouse တာဝန်များကို သိရှိနားလည်ပြီး လိုက်ပါဆောင်ရက်ွနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ Warehouse တင်ွရှိသော ပစ္စည်းများကို ကောင်းမနွ် ထိန်းသိမ်း ကိုင်တယ်ွနိုင်သူ၊ စစ်ဆေးနိုင်သူ၊ အပြောင်းအရွှေ့လုပ်ဆောင်နိုင်သူ၊ Packing လုပ်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
Work location No.32, Manawhari Road, Dagon Township, Dagon Townsh, Yangon
•	အနညျးဆုံး (၆)လ လုပျကိုငျနိုငျသူ
•	အသကျ (၃၀)နှဈအောကျဖွဈရမညျ။ •	ကနျှပြုတာအသုံးပွုနိုငျသူအား ဦးစားပေး ခနျ့အပျမညျ။ •	အကငျြ့စာရိတ်တကောငျးမနျှရမညျ။ •	တောငျဒဂုံ မွို့နယျ၏ အနီးတဝိုကျနထေိုငျသူမြားအား ဦးစားပေးမညျ။ •	Warehouse တာဝနျမြားကို သ� ...
•	Type documents and reports •	Maintain office filing •	Update and maintain database •	Maintain and ensure stocks level •	Distribute necessary stocks throughout whole country •	Check day to day calls
•	Responsible for entering general ledger. •	Day to Day Finance and accountant Operations •	Protects organization's value by keeping information confidential •	Assist with other accounting projects •	Other duties assigned by the management •	Update accounts receivable and issue invoices •	Assist in the processing of balance sheets, income statements and other financial statements according to legal and company accounting and financial guidelines
Job Purpose Markets products by developing and implementing medical promotion, marketing and advertising campaigns; tracking sales data; maintaining promotional materials inventory; planning meetings with customers(both clinics and doctors’) and preparing trade shows; maintaining databases; preparing reports. Responsibilities: •	Maintains customer response operations by establishing work schedules. •	Plans meetings with doctors or other customers by : •	Identifying, assembling, and coordinating requirements (such as gimmicks, samp ...
၁။ LCCI Level 1 /2 အောင်မြင်ပြီးသူများအား ဦးစားပေးမည်။ ၂။ Settlement နှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းကိစ္စ အ၀၀ ကို ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်။ ၃။ စာရင်းဇယားများအား တိကျသေချာစွာ စစ်ဆေး လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ ၄။ လုပ်ငန်� ...
၁။ ကန်ွပျုတာအသုံးပြုနိုင်သူအား ဦးစားပေး ခန့်အပ်မည်။ ၂။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမန်ွရမည်။ ၃။ တောင်ဒဂုံ မြို့နယ်၏ အနီးတဝိုက်နေထိုင်သူများအား ဦးစားပေးမည်။
•	Settlement ကိစ္စများကို အဓိကထားတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပြီး အခါအားလျော်စွာ Cash Collection and Delivery တာဝန်များကိုလည်း ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ •	Computer အခြေခံ သုံးစွဲတက်သူ အား ဦးစားပေးမည်။ •	Settlement နှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်း အတေ� ...
MR (Medical Representative) M/F (.)
•	Maintains customer response operations by establishing work schedules. •	Plans meetings with doctors or other customers by : •	Identifying, assembling, and coordinating requirements (such as gimmicks, samples, etc.,); •	Establishing contacts; Developing schedules and assignments; •	Coordinating mailing lists (Contact Information). •	Maintains quality service by : •	Establishing and enforcing standards; •	Making effective calls; Surveying customers; •	Evaluating outcomes. •	Accomplishes organization goals by ...
•	Deliverawide variety of items to different addresses and through different routes •	Follow routes and time schedule •	Products load, unload, prepare, inspect and operateadelivery vehicle •	Ask for feedback on provided services and resolve clients’ complaints •	Collect payments •	Inform customers about new products and services •	Complete logs and reports •	Must have follow KTZ company regulations, policies and safety standards Sales Representative (FMCG)
Warehouse Assistant Logistics & Supply Chain Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon K.T.Z Company Logistics & Supply Chain Jobs Logistics & Supply Chain Jobs Accounting / Audit / Tax Services Jobs in Myanmar, jobs in Yangon